● Ufakelo Version French kunye ukusebenza nge-intanethi, ixhasa uNyulo Internet.
● Real OEM uhlelo isiqinisekiso, edityaniswe kwindlela 64bits, umsebenzi full wawuhlanganisa
● French une-inshorensi Ukhuseleko, Made in USA, Made in Ireland, Made in Singapore, etc
Ixesha Lead: Iiyure ezingama-24
Trial Order: Inkxaso
1.Windows 10 kukunika amava kakhulu ukuqala ngok nokufumana izinto ezenziwa
2.Windows hello na igama-free uphawu-in ikunika ukuba le ndlela wakuzila, ikhuseleki- ukuba ukuvula izixhobo zakho Windows
3.Windows 10 elihambisa ukhuseleko olubanzi - kuquka wesi, firewall, ukhuselo Internet, kunye nangaphezulu
BitLocker weeNgcombolo ezintlantlu-ntathu kunye nokukhuselwa uncedo ukugcina ulwazi lwakho luphephile
4.Hyper-v functionality kukuvumela wenze oomatshini virtual, ngelixa desktop ekude ikuvumela ukuba ungene ngemvume kusuka ngeyahlukileyo icomputer
Isihloko: Windows 10 Pro USB Version 64Bit IsiNgesi-International Full
Amagama Key: windows inkqubo 10 yokusebenza; win 10 bookmark us pro
10 Pro System Windows Operating: Remote log-in, nomncedisi digital lobuqu, kunye nesakhono sokusebenzisa enedesktop ezininzi ezinesiqhamo kuya kukunceda ukuba ukwandisa imveliso. Zoba okanye ubhale kumaphepha e web kwaye wabelane nabo amanqaku elungelelanisiweyo. Xa lixesha lokuphumla, uyakwazi ngumsinga isiqulatho Xbox One kwi Windows 10 PC, laptop, okanye tablet.
Thatha amanqaku kwi web browser entsha Microsoft Edge
Zoba, bonisa, okanye ubhale ngqo kwi iphepha le web kusetyenziswa isikrini okanye mouse, koko wabelane amanqaku zakho nabanye.
Yenza i menu Start
Khetha ukubonisa apps zakho ezininzi ezisetyenziswayo okanye kutshanje wongezelela, iincwadi ezithile, okanye Useto inkqubo.
Baleka iinkqubo ezininzi okusebenza PC enye
Yenza oomatshini enesiqhamo Hyper-V ukubaleka ngaphezu kwesinye inkqubo yokusebenza ngexesha elifanayo. (Hyper-V ifuna inkqubo bit-64 kunye elinye icala izakhono kunye RAM ezongezelelweyo 2GB.)
Ngena kwi ukude ne yeDesktophu esiSiseko
Ngena kwi Windows 10 Pro ekhaya, kwi-ofisi, okanye xa ehamba. (Uqhagamshelo Internet efunekayo; Imirhumo ISP angafaka isicelo.)
Ukungena kwidivayisi yakho ngokusebenzisa iminwe yakho, ubuso, okanye iris
Khetha Windows izixhobo-10 kunye Windows Hello uya kugqala ebusweni bakho, ukuvula ngaphandle imfuneko password. (Ifuna umfundi weminwe, okanye isivamvo IR okanye sebhayometriki.)
Zemenyu ukuzivumelanisa ukulingana izixhobo zakho
orientation esesikrinini utshintsha imilo ukuvumela navigation lula, kunye nosetyenziso abasakhasayo imiboniso eyahlukileyo-ubungakanani.
Fikelela inethiwekhi yakho
Windows 10 Pro edityaniswe ishishini okanye isikolo sakho ithambeka ukufikelela iifayile womnatha, iiseva, abashicileli, kwaye ngaphezulu.
Dlala Xbox One imidlalo kwi Windows 10
Kubantu bakho Xbox One imidlalo kwi Windows 10 PC, laptop, okanye tablet. Dlala imidlalo olulungiselelwe Windows-10, okanye irekhodi kwaye wabelane kwimizuzu okudlala kunye Game DVR eyakhelwe-ngaphakathi. (Broadband Internet efunekayo.)
Ngokulula ezininzi kwelinye screen
Snap ukuya apps ezine ukuya ikhusi, okanye wenze desktops ezingabonakaliyo ukufumana isithuba ngakumbi ukusebenza izinto ozifunayo.
Ukufumana uncedo njengomncedisi digital lobuqu
Cortana lunceda kuzo zonke izixhobo zakho Windows 10, isimo sentlalo izikhumbuzo, ukunceda ukubhala imeyili, okanye ibamba izingxoxo nabahlobo kunye namalungu entsapho. (Cortana amava lunokwahluka ngokwengingqi nangengcinga.)
Ukukwandisa ukhuseleko data
Windows 10 ukunikezwa Pro ufihlo ubuchwepheshe uNgqamaniso lwendawo, kunye nohlaziyo ngokuzenzekelayo kunye yokuHlaziya yeWindows, ukunceda ukukhusela iinkcukacha zabucala. (BitLocker ifuna ukholose Platform Umnqongo 1.2 okanye 2.0, okanye USB flash drive.)
Lula ukufikelela izicelo
Windows 10 Pro ikuvumela ukuba eyakho app icandelo lwakho kwi- Ivenkile ukufikelela olukhawulezayo lwezicelo. (Inani lezicelo anokuthi yayiyiqhawuqhawula iya kuxhomekeka isisombululo lincinane isicelo.)
Previous: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version in FQC08929 IsiNgesi
Next: Microsoft Win 10 Pro 64bit OEM Version e French kunye Uthotho kusebenze Key online
Phambi kokuba download 10 Professional Windows, ikhompyutha yakho kufuneka ukuzalisekisa mfuno zilandelayo:
Iprosesa: 1 gigahertz (GHz) okanye ngokukhawuleza.
RAM: 1 gigabyte (GB) (bit-32) okanye ezi-2 GB (-64 bit)
Free isithuba sediski hard: 16 GB.
Graphics ikhadi: Microsoft iDirectX isixhobo mifanekiso 9 WDDM umqhubi.
Fast Delivery Win 10 Pro OEM French Version Ope...